वैदेशिक राेजगारबाट फर्केका छोराद्वारा श्रीमती र आफ्नै बुवालाई…… – Classic Khabar
वैदेशिक राेजगारबाट फर्केका छोराद्वारा श्रीमती र आफ्नै बुवालाई……
August 24, 2021 130
मिथिला बिहारी नगरपालिकामा ससुरा र बुहारीको शव एउटै खाल्डोमा गा’डे’को अवस्थामा फेला परेको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको अनुसार मिथिला बिहारी-५ ललियाका ५५ वर्षीय रामवृक्ष मण्डल र २४ वर्षीया अम्रिका देवी मण्डलको श’व फेला परेको हो। उनीहरुको ह’ ‘त्या आरोपमा रामवृक्षका छोरा ३० वर्षीय भागेश्वरलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डिएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए।
दुवै जनाको शव घर नजिकै झाडीमा खा ‘ल्डो ख’ने’र गा’डेको अवस्थमा फेला परेको हो। रातिदेखि बेपत्ता उनीहरुको खोजतलास गर्ने क्रममा झाडीमा माटो खनिएको जस्तो शं’का’स्पद ठाउँ देखिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। घटना लगत्तै प्रहरीले भागेश्वरलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा उनले ह’ ‘त्या गरेर श’व गा’डे’को स्वीकार गरेको प्रहरीले बताएको छ। शव गा’डे’को ठाउँमा श’व निकालेका थिए ।
मृतक दुवैजनाको टाउकोमा ग’हि’रो चो’ ‘ट देखिएकाले र’ ‘ड प्र ‘हा ‘र गरी ह’ ‘त्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। राति नै ह’ ‘त्या गरेर श ‘व गा’डे’को शं’का छ।
भागेश्वरले वैदेशिक रोजगारमा रहेका बेला बुवा र श्रीमतीबीच अ नै’ति’क स’म्ब’न्ध रहेको आ’शं’का’मा यस्तो गरेको हुन सक्ने आ’शंका गरिएको छ। स्थानीयका अनुसार भागेश्वर गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका हुन्। घर फर्केपछि उनले बुबा र श्रीमतीबीच अ’नै’ति’क स’म्ब’न्ध रहेको आ’शं’का गर्दै आएका थिए। जस कारण उनको श्रीमतीसँग दिनहुँ झ’ग’डा हुँदै आएको बताइएको छ।
भागेश्वर र अम्बिकादेवीका एक छोरा र एक छोरी छन् । झ’ग’डा भएपछि गए रातिदेखि नै ससुरा र बुहारी दुवै बे’प’त्ता भएका थिए । दुवैको खोजी गर्दै जाँदा श’व गा’डे’को अवस्थामा देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
Prevबिष्णु मझी ले चरी जेलैमा गीत गाएपछी उनको वास्तविक जिवन बारेमा खुल्यो ठुलो रहस्य, किन सधै गुमनाम छिन बिष्णु ? भिडियो सहित
Nextह्वातै घट्यो यी शेयर बजारमा यी कम्पनीको मुल्य
सर्वसाधारणलाई मात्र कडाई? मन्त्री आलेले भन्सार छलेर ल्याए आइफोन, रोलेक्स र मदिरा
मनदेखि नै धन्यवाद दिएको सिद्धार्थ शुक्लाको अन्तिम ‘पोस्ट’ भाइरल